GMP Nadaafadda - Guangzhou Airwoods Deegaanka Teknolojiyadda Co., Ltd.
GMP waxay u taagan tahay Tababar Soosaarid Wanaagsan, Nidaamyada lagu taliyay waxay jaangoynayaan kala duwanaanshaha wax soo saarka oo leh shuruudaha ugu yar ee warshadaha kala duwan. Ku dar warshadaha cuntada, soo saarista dawooyinka, waxyaabaha la isku qurxiyo, iwm. Haddii ganacsigaaga ama ururkaagu u baahan yahay hal ama in ka badan oo nadiif ah, waxaa muhiim ah in la helo nidaam HVAC ah oo nidaamiya jawiga gudaha iyadoo la ilaalinayo heerarka ugu sarreeya ee tayada hawada. Sanado badan oo aan khibrad u lahayn qolka nadiifinta, Airwoods waxay leedahay khibrad ay ku qaabeyso kuna dhisto qolal nadiif ah heerarka ugu adag ee qaab dhismeed ama codsi kasta ah.
Shuruudaha HVAC ee Qolka Nadiifinta
Qolka nadiifinta waa goob bay'ad lagu kontoroolo oo gebi ahaanba ka xor ah wasakhda deegaanka sida boodhka, xasaasiyadda hawada, microbes ama uumiga kiimikada, sida lagu cabiray walxaha halkii mitir cubic.
Waxaa jira kala soocid kala duwan oo ka mid ah qolalka nadiifka ah, waxayna kuxirantahay arjiga iyo sida ay hawadu u ahaato mid aan wasakh lahayn. Qolalka nadiifka ah waxaa looga baahan yahay codsiyo badan oo cilmi baaris ah sida bayotechnoolajiyadda, caafimaadka iyo dawooyinka, iyo sidoo kale soo saarista qalabka elektaroonigga ah ama kombiyuutarka xasaasiga ah, semiconductors iyo aerospace qalabka. Qolalka nadaafaddu waxay u baahan yihiin nidaam khaas ah oo qulqulka hawada ah, shaandhaynta iyo xitaa qalabka derbiga si tayada hawadu ugu ilaaliso heerarka loo qoray. Codsiyada badan, huurka, heerkulka iyo koontaroolka korantada ee joogtada ah ayaa sidoo kale u baahan kara in la xakameeyo.
Warshad Qalab Caafimaad
Qolka Sahayda Dhexe ee Cusbitaalka
Qeybteena Qabashada Hawada Nadiifinta, Nidaamyada Saqafka, iyo Customize Nadaafadda waxay ku habboon yihiin xarumaha u baahan maareynta wasakhda iyo wasakhda ee meelaha nadiifka ah iyo bey'ada shaybaarka, oo ay ku jiraan wax soo saarka dawooyinka, wax soo saarka elektaroonigga ah ee xasaasiga ah, sheybaarada caafimaadka iyo xarumaha cilmi baarista.
Injineerada Airwoods iyo farsamo yaqaanada ayaa khibrad dheer u leh naqshadeynta, dhisida iyo ku rakibida musqulaha caadada u ah nooc kasta ama heerka macaamiisheenu u baahan yihiin, hirgelinta isku darka shaandhada HEPA ee tayada leh ee tikniyoolajiyadda horumarsan ee hawada si looga dhigo mid gudaha ah mid raaxo leh oo wasakheysan. Qolalka u baahan, waxaan ku biirin karnaa nidaamka ionization iyo qoyaanka qoyaanka nidaamka si loo xakameeyo qoyaanka iyo korantada ma guurtada ah. Waxaan naqshadeyn karnaa oo dhisi karnaa softwall & hardwall nadiifinta meelaha yar yar; Waxaan ku rakibi karnaa qolal nadiif ah oo loogu talagalay codsiyada waaweyn ee u baahan kara wax ka beddel iyo ballaarin; iyo codsiyo joogto ah oo dheeraad ah ama goobo waaweyn, waxaan abuuri karnaa qol nadiif ah oo lagu dhex-rakibo si ay u qaabisho wax kasta oo qalab ah ama tiro shaqaale ah. Waxaan sidoo kale bixinnaa hal-joogsi EPC guud ahaan adeegyada baakadaha mashruuca, iyo xallinta dhammaan baahiyaha macaamiisha ee mashruuca qolka nadiifka ah.
Ma jiro meel qalad laga helo markay tahay naqshadaynta iyo rakibidda musqulaha. Haddii aad dhiseysid qol cusub oo nadiif ah laga soo bilaabo sagxadda dhulka hoostiisa ama aad wax ka beddelayso / ballaadhinayso midkaaga jira, Airwoods waxay leedahay farsamo iyo khibrad ay ku hubiso in shaqada la qabtay markii ugu horraysay.
Qolka Nadiifinta ee Biyo Dhaaminta Gaana ee Gaana
Qolka Nadiifinta ee Xarunta Xakamaynta Cuntada & Maandooriyaha